China MIG-200SD LCD Ratidza 110 / 220V 2t / 4t Basa Vrd 5kg Waya Welder vagadziri uye vanotengesa | Wanquan
MIG-200SD LCD Ratidza 110 / 220V 2t / 4t Basa Vrd 5kg Waya Welder
Iyi modhi ndeimwe yakawanda-inoshanda inverter yekutengesa muchina
MIG / MMA / KUSVIRA TIG matatu mune imwe welder
Weld simbi, kabhoni simbi, isina simbi simbi, aluminium
Nyore kuvhiyiwa kwakavakirwa akangwara synergy hurongwa
Yakadzika kwazvo spatter kana weld, yakanaka yekutamba mashandiro
Gasi simbi arc kutenderera (GMAW) inzira yekutenderera ine mhando yepamusoro uye nemhando yepamusoro. Nekufambiswa uye kushandiswa kwesemi-otomatiki kutenderera uye otomatiki kutenderera, GMAW inotamba chinonyanya kukosha nzira munzira dzakasiyana siyana dzekutema. P-GMAW ndiko kupfupisa kwepulsed gasi simbi arc kutenderera. Iyo mhando yegasi simbi arc kutenderera ine nguva nenguva musiyano wekutenderera ikozvino. Yakagadzirwa neBritish Welding Research Institute muma1960. P-GMAW inowedzera inowedzeredza iwo maratidziro emoto uye ine yakanaka yekudzivirira mhedzisiro
Kubva pane musimboti we modular software dhizaini, iyo system kuyerera kudzora chirongwa cheakangwara arc welding magetsi magetsi akagadzirwa. Pamusoro peichi hwaro, zvinoenderana nemaitiro ehunhu uye zvinodiwa neP-GMAW (pulsed gasi simbi arc kutenderera), yakabatana maitiro ekudzora algorithm yakagadzirirwa uye yakagadziriswa neakakura-madiki calibration. hongu φ 0.8 mm uye φ Iyo yekumwaya kuyedza kwe1.6 mm kabhoni simbi yekutengesa waya yakaitwa pasi penzizi dzakasiyana. Nekuongorora ikozvino waveform uye weld kugadzirwa, akakodzera iwelding parameter eakasiyana maitiro akawanikwa, uye yakabatana paramende nyanzvi dhatabhesi yedigital pulse MIG welding yakagadziriswa. Iyo yekutenderera inoenderana uye iyo weld yekuumbwa yakanaka
Iyo yekushandisa modhi inopa chishandiso chakabatana mutemo. A MIG yemagetsi yekuwachisa muchina wedunhu ndeyenzvimbo yehunyanzvi yemagetsi emagetsi michina. Yakagadziriswa Mune yepamberi hunyanzvi, yechinyakare MIG yekumonera muchina inoda kugadzirisa manyore kuburitsa Kufananidza kwemagetsi uye waya kudyisa kumhanya. Dunhu racho rinosanganisira yekutyaira module, Welding muchina wedunhu wekuburitsa iwelding voltage uye yekudzora waya kudyisa PWM yekudzivirira module yemota yekuisa magetsi.
Iyo overdrive module yakabatana kune yakakosha wedunhu yemuchina wekutemesa, uye zvakare yakabatana nePWM yekudzivirira Waya yekudyisa voltage inodzora yuniti uye waya yekumhanyisa kumhanya inodzora yuniti yakabatana ne module. Iyo tambo yekudyisa voltage inodzora yuniti ine maviri ma resistor akabatana muakafanana, Waya yekudyisa voltage inodzora yuniti kuburitsa uye waya yekumhanyisa kumhanyisa inogadzirisa yuniti kuburitsa. Mhedzisiro yekupedzisira yedunhu hombe remushini wekuwachira wakabatana netambo yekudyisa mota Detection unit yekutsvaga kuwelding kubuda yazvino nemagetsi, yekuona unit Mhinduro yacho yakabatana neiyo PWM yekudzivirira module. Iyo dunhu inodarika neyakareruka unary. Nekugadzirisa iyo voltage yemota, iyo yekuburitsa voltage inogona kugadziridzwa Iyo Welding voltage inoenderana neiyo waya yekumhanyisa kumhanya.
Chinhu UNIT MIG-200SD
Inzwa Zvinotaurwa Power Voltage V 110 / 220V, 1Ph
Kubuda Kwazvino (MIG, 220V) A 30-200
Kubuda Kwazvino (MIG, 110V) A 30-140
Kubuda Kwazvino (MMA, 220V) A 20-170
Kubuda Kwazvino (MMA, 110V) A 20-110
Kubuda Kwazvino (Simudza TIG, 220V) A 10-200
Kubuda Kwazvino (Simudza TIG, 110V) A 10-140
Pashure: MIG-280syn 380V IGBT Inverter LCD Ratidza Smart Synergy Welder
Zvadaro: MIG-200s 4 mu1 Multifunction Dhijitari Inverter Gasi Inodzivirirwa MIGMMATIG Welder
MIG-500 380V CO2 MIG Welding Chinyorwa Metal MIG W ...
MIG-200s 4 muna 1 Multifunction Dhijitari Inverter ...